အင်္ဂလန်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၆၆ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၈)
14 Jun 2018 . 5:46 AM
အင်္ဂလန်အသင်းက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ အခုတစ်ကြိမ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင် (၃)လလောက် အလိုမှာ ပြသထားတဲ့ ဂျူးရီးမက်ဆုဖလား ပျောက်ဆုံးမှုကြောင့် ထင်ရှားတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖလားပျောက်ဆုံးခဲ့လို့ ပုံစံတူ ဖလားတစ်လုံးကို အလျင်အမြန်ပြုလုပ်ပြီးချိန်မှ “ပစ်ကယ်” အမည်ရတဲ့ ခွေးလေးကြောင့် ဆုဖလားကို ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့လို့ ကမောက်ကမ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် ခြေစစ်ပွဲကို အသင်းအရေအတွက်အများဆုံးအဖြစ် အသင်းပေါင်း (၇၀)ကျော် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး မြောက်ကိုရီးယားအသင်း ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့လို့ အာရှတိုက်ကိုယ်စားပြု အသင်းတွေထဲမှာ ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် ပြသခဲ့တဲ့ ခြေစွမ်းတွေကြောင့် ပေါ်တူဂီ ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး အူဆီဘီယို နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲကို အိမ်ရှင်အင်္ဂလန်နဲ့ အနောက်ဂျာမနီအသင်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကာ မိနစ် (၉၀)အတွင်း (၂-၂)ဂိုးစီ သရေကျနေခဲ့လို့ အချိန်ပို ဆက်လက်ကစားခဲ့ရပြီး အချိန်ပို အရောက်မှာ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဂျော့ဖ်ဟတ်စ်ရဲ့ ဂိုးစည်းမကျော်ခဲ့တဲ့ တစ္ဆေဂိုး အပါအ၀င် (၄-၂)ဂိုးနဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းက အနိုင်ရပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ကမ္ဘာ့ဖလား ချန်ပီယံဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲမှာ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် (၃)ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဂျော့ဖ်ဟတ်စ်ကတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတစ်လျှောက် Hat-Trick သွင်းယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၉)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၁၉၆၆ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်းအကျဉ်း
Host Country – England
Dates – 11–30 July (20 days)
Venue(s) – 8 (in7host cities)
Champions – England (1st title)
Third Place – Portugal
Fourth Place – Soviet Union
Goals Scored – 89 (2.78 per match)
Attendance – 1,563,135 (48,848 per match)
Top Scorer(s) – Eusébio – Portugal (9 goals)
Best young player – Franz Beckenbauer (West Germany)
Photo:Independent, Reddit.com, Whale Oil
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၈)
အင်ျဂလနျအသငျးက အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခှငျ့ရရှိခဲ့တဲ့ အခုတဈကွိမျပွိုငျပှဲမှာတော့ ပွိုငျပှဲမတိုငျခငျ (၃)လလောကျ အလိုမှာ ပွသထားတဲ့ ဂြူးရီးမကျဆုဖလား ပြောကျဆုံးမှုကွောငျ့ ထငျရှားတဲ့ ပွိုငျပှဲတဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဖလားပြောကျဆုံးခဲ့လို့ ပုံစံတူ ဖလားတဈလုံးကို အလငျြအမွနျပွုလုပျပွီးခြိနျမှ “ပဈကယျ” အမညျရတဲ့ ခှေးလေးကွောငျ့ ဆုဖလားကို ပွနျရှာတှခေဲ့လို့ ကမောကျကမ ဖွဈရပျတှနေဲ့ နာမညျကြျောခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ ခွစေဈပှဲကို အသငျးအရအေတှကျအမြားဆုံးအဖွဈ အသငျးပေါငျး (၇၀)ကြျော ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခဲ့ကွပွီး မွောကျကိုရီးယားအသငျး ခွစေဈပှဲအောငျမွငျခဲ့လို့ အာရှတိုကျကိုယျစားပွု အသငျးတှထေဲမှာ ခွစေဈပှဲအောငျမွငျပွီး ပထမဆုံးအကွိမျ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျတဲ့ နိုငျငံအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ ပွသခဲ့တဲ့ ခွစှေမျးတှကွေောငျ့ ပျေါတူဂီ ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး အူဆီဘီယို နာမညျကြျောခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဗိုလျလုပှဲကို အိမျရှငျအင်ျဂလနျနဲ့ အနောကျဂြာမနီအသငျးတို့ တကျရောကျခဲ့ကာ မိနဈ (၉၀)အတှငျး (၂-၂)ဂိုးစီ သရကေနြခေဲ့လို့ အခြိနျပို ဆကျလကျကစားခဲ့ရပွီး အခြိနျပို အရောကျမှာ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှူး ဂြော့ဖျဟတျဈရဲ့ ဂိုးစညျးမကြျောခဲ့တဲ့ တစ်ဆဂေိုး အပါအဝငျ (၄-၂)ဂိုးနဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးက အနိုငျရပွီး ပထမဆုံးအကွိမျ ကမ်ဘာ့ဖလား ခနျြပီယံဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဗိုလျလုပှဲမှာ အင်ျဂလနျအသငျးအတှကျ (၃)ဂိုး သှငျးယူပေးခဲ့တဲ့ တိုကျစဈမှူး ဂြော့ဖျဟတျဈကတော့ ကမ်ဘာ့ဖလားသမိုငျးရဲ့ ဗိုလျလုပှဲတဈလြှောကျ Hat-Trick သှငျးယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၉)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၁၉၆၆ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ မှတျတမျးအကဉျြး